Accueil > Gazetin'ny nosy > Depiote : Mifampihatsara ivelan-tsihy
Niteraka resaka be teto amin’ny tontolon’ny Antenimierampirenena ny vokatra ny fifidianana izay nahalany100% ho filohan’ny Antenimierampirenena vaovao an-dramatoa Razanamahasoa Christine avy any Ambatofinandrahana ny talata faha 16 jolay 2019 teo tamin’ny mpifidy miisa 147.
Aoka hazava ny resaka fa tsy ny fahalanian’ity ramatoa ity no ametrahan’olona fanontaniana ankehitriny fa ny fomba nandanian’ny depiote rehetra azy.
Raha ny vaovao mahakasika ny fifidianana izay ho filohan’ny Antenimierampirenena io no iverenana dia nahagaga ihany io 147/147 io. Tena avy amin’ny fo sy ny sain’ireo depiote ireo ve no nanao io fandaniana io sa misy zavatra hafa ao ambadik’izany?
Ny alatsinainy faha 15 jolay 2019 teo dia nivory tao amin’ny ARENA tetsy Ankorondrano izay misy ny foiben’ny vondron’antoko sy fikambanana manohana an’i Andry Rajoelina (IRD) ny depiote maro. Isan’ny nanatrika izany koa ingahy Andry Nirina Rajoelina. Toa ny efa nolazainay teto amin’ity gazety ity dia nisy maromaro no nilatsaka ka Razanamahasoa Christine, Irma Naharimamy, Fienena Richard.
Rehefa nahita ny fandehan’ny ady hevitra sy ny fizotran’ny raharaha tao amin’ity toerana ity dia niala tsy hilatsaka ho filoha ingahy Fienena Richard. Noho izany dia Razanamahasoa Christine sy Irma Naharimamy ihany sisa hisafidianana.
Koa rehefa nifidy ireo mpikambana ao amin’ny IRD sy ny antoko sy mpikambana nanampy azy dia nahazo vato 22 ramatoa Irma ary 77 kosa no azon-dRazanamahasoa Chriostine hoy ny loharanom-baovao.
Ingahy Rajoelina izay filohan’ireo antoko sy ny fikambanana ireo moa dia nanome malalaka izay tian’ny mpikambana ka tokony ho amin’izany toerana izany, raha ny loharanom-baovao hatrany.
Dia notanan’ireo mpikambana ao amin’ny IRD sy ny mpomba azy avy amin’ny tsy miankina izany ka mazava fa tsy maintsy mandresy amin’ny fifidianana ramatoa Christine Razanamahasoa.
Rehefa tonga nefa ny fifidianana natao tao amin’ny lapa tao Tsimbazaza dia fahagagana lehibe no nitranga satria lany tsy misy nanohitra na iray aza Razanamahasoa Christine. Hatramin’ny TIM (Tiako i Madagasikara) izay antokon’ingahy Ravalomanana Marc izay mpanohitra amin’izao fotoana izao dia nifidy an-dRazanamahasoa Christine koa 100%.
Omaly alakamisy faha 17 jolay 2019 dia nitady ny anton’iny raharaha iny teny amin’ny Antenimierampirenena izahay mpanao gazety hanontany marina ny dikan’izao satria niteraka resabe teto Madagasikara iny fifidianana iny. Marihina fa na inona na inona nataon’ireo mpanohitra dia tsy maintsy lany ho filoha Razanamahasoa Christine satria efa manana depiote 102 amin’izao fotoana izao ny IRD.
Ny dikan’iny vokatra iny no be mpiresaka ankehitriny satria raha ny resaka nataon’ireo mpomba an-dRavalomanana Marc dia tsy faly amin-dRazanamahasoa Christine velively izy ireo saingy nihatsara ivelan-tsihy fotsiny ihany. Misy mihitsy aza no milaza fa avelao handeha amin’io dia ho hitantsika ny tohiny. Midika izany fa misy fandrika na tetika hafa kotrehin’ireo depiote ireo amin’ny fandaniana azy 100% tamin’iny fifidianana iny.
Ho an’ny mpijery ety ivelany dia maro no milaza fa tsara ny mandresy saingy hafahafa ihany ny fihetsika depiote ireo ka mila fandinihana lalina iny raharaha iny.
Ny ankamaroan’ny mpanara-baovao anefa milaza fa fantatra fa tsy maintsy mandresy ny IRD. Eo amin’ny fenitra demôkratika nefa tsy hita matetika izany lany 100% amin’ny fifidianana izany raha tsy mangalatra. Iny fifidianana iny nefa tsy nisy halatra fa tena an-tsitrapo tanteraka ary tsy nisy fividianana olona koa.
Heno koa omaly fa misy mpikambana ao amin’ny IRD no tsy faly amin’ity filohany vaovao ity saingy nanaraka fotsiny ihany ny baikon’ny filohany.
Ny fivoriana izay nitranga omaly tamin’ireo samy IRD koa dia nahenoana fa nisy fifanoherana amin’izy samy izy ireo tao Tsimbazaza tao mahakasika ny fifidianana.
Mila mitandrina mafy noho izany ny IRD sy Razanamahasoa Christine izay lany ho filohan’ny Antenimierampirenena ankehitriny fa misy dikany lehibe izay mampiahiahy ny olona maro iny fifidianana azy iny satria toa mifono fihatsaram-belatsihy amin’ireo samy depiote na ireo mpiara-dia aminy izany na koa ireo milaza azy ho mpanohitra.